Mee ka onye obula nwee obi uto egwuregwu
Peripherals kacha mma 2020& 2021 maka ndị egwuregwu ụwa
Ihe mgbaru ọsọ nzukọ bụ iji mejuo ndị ahịa anyị na ndị egwuregwu ụwa zuru oke ma nwee ntụkwasị obi dị mma iji hụ na ndị ahịa na ndị ọkpụkpọ nwere ike nwee ahụ iru ala ma nwee obi ike na akụkụ egwuregwu anyị na ngwa ha. Egwuregwu egwuregwu na keyboard na keyboard, ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ na-egwu egwuregwu achọtala ngwa ha na ahịa n'ihi mma ha. Ha nwere ọtụtụ atụmatụ nke na-akwado mgbasa na ngwa.
Kemgbe e guzobere ya, “Na-akwalite mmepe nke ngwaahịa sayensị na teknụzụ, me ka ihe omimi nke sayensị na teknụzụ dị omimi” bụ echiche azụmaahịa nke Meetion A usoro nke ejiji egwuregwu egwuregwu peripherals imewe& echiche pụrụ iche& ihe kacha mma eji egwu pc na komputa& ngwa nwere e ahịa ọma n'okpuru na nkà ihe ọmụma.
Ngwá ọrụ kachasị mma maka ịgba chaa chaa na ụlọ ọrụ: Inwe ihe karịrị ndị ọrụ 200; Mpaghara ụlọ ọrụ karịrị 10000㎡; Isii zuru akpaka mmepụta nzukọ e; Ihe karịrị 10 zuru ọgụgụ isi ọgwụ ịkpụzi igwe; Ngwa kọmputa egwuregwu kọmputa na ngwa PC na-ewepụta kwa ọnwa karịa 800,000. Anyị na-agafe ma mejuputa usoro ntinye aka nke mba dị iche iche ISO 9001: 2008. Ngwaahịa zuru ezu gafere mba asambodo CE, FCC, RoHS, na REACH, wdg
N'ihi na aha ọma, zuru okè mma na elu-larịị imewe, a otu ebe iyi nke ngwaahịa na-exported na METION na mba ndị ọzọ na mpaghara nke ụwa; na kwa anyị ehiwela ezigbo mmekọrịta nke imekọ ihe ọnụ na ụlọ ọrụ IT ama ama n'etiti ụlọ na mba ofesi.